Maalinta: Maarso 28, 2019
Gaadiidka Baska ee u dhexeeya Sabiha Gökçen Airport iyo Pendik YHT
Gaadiidka u dhexeeya Sabiha Gokcen Airport iyo Pendik Station Speed ​​Train Station ee Istanbul waxaa bixiya khadka IETT ee MR60 ee dhowaan la furay. Basaska bixiya gaadiid u dhexeeya Pendik YHT-Sabiha Gökçen Airport oo leh lambar khadka MR60 ee dhowaan la furay [More ...]
Degmooyinka Magaalada Sakarya ee Magaaladda 'Magaalada dib ayaa loo cusbooneysiinayaa' iyada oo halku dhigga wajiyada cusub ee wadooyinka Sakarya ay ku qalabeysan yihiin joogsiyo casri ah oo nolosha fudud looga dhigayo. Pistil, “Waxaan dhammaynay heerkii ugu horreeyay ee cusboonaysiinta shaqadeenna. 120 istaatiitii la xiray, Saddex XXX [More ...]
Saldhigga Biçerova 1 iyo 2 Kaydka Kaydinta Kaydinta Meesha, Dayactirka, Dayactirka iyo Dhismaha Wadada iyo Khadka toosan ee Isgoyska Bivaerova-Nemport TC State Railways Maamulka TCDD 3. Gobolka Iibsiga [More ...]
Farxada gorgortanka wadajirka ah ee madaarka Istanbul
Metro Istanbul, mid kamid ah la shaqeynta Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa ku raaxeysatay heshiiska gorgortanka wadajirka ah. Iyada oo la raacayo heshiiska ku saabsan shaqaalaha gudaha, ayaa waxaa la go'aamiyay sicirka cusub ee shaqaalaha. Metro Istanbul, waa shirkad hoos timaada Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul [More ...]
Magaaladda Tekirdağ Corlu Magac Beddelay
Waxaa la soo gabagabeeyey howsha loogu bedelayo magaca garoonka Tekirdağ Çorlu Airport ee Tekirdağ Çorlu Atatürk Airport. Iyadoo la raacayo hadalada iyo tilmaamaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda, Recep Tayyip Erdoğan, Wasaaradda Gaadiidka iyo [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun ayaa ku qaabilay Xarunta Dariiqa Suudaan iyo wafdiga la socda xafiiskiisa. Ali İhsan Uygun, Maamulaha Guud ee TCDD, wuxuu soo maray sanado badan oo aqoon, khibrad iyo waayo-aragnimo leh [More ...]
Gaadiidka cusub ee Neefta Neefsashada ee Denizli
Mid ka mid ah maalgashiga cusub ee Denizli Metropolitan Municipal ee ku yaal aagga gaadiidka, 30 mitir ballaaran oo Waddada New Street ayaa la dhammeystirey oo loo furay gaadiid. Yeni Cadde wuxuu bixiyaa xiriir ka dhexeeya İzmir Boulevard iyo 29 Ekim Boulevard, Örnek Street, [More ...]
Basaska waa in lagu raaco xaalad xasilooni daro
Muwaadiniinta raacaya basaska Dawlada Hoose ee ka imanaya aaladaha mobilada waxay arki karaan inta daqiiqo ee basku joogsan doono ee ka imanaya shaashadda khaaska ah ee joogsiga iyadoo la adeegsanayo dalabka cusub. Waqti ka hor nidaamka gaadiidka dadweynaha [More ...]
2 ee Salim Dervishoge Street. Heerka dhameystiray
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa isu badalaysa Izmit Salim Dervisoglu Street waddo laba jibaar ah iyada oo ay sii kordhineyso shaqooyinkeeda. Marka shaqadu dhamaato, waxaa jiri doona waddo labanlaab ah oo leh safar wareeg ah. Salim Dervişoğlu wuxuu dhameystiray wejiga 600aad oo 2 mitir ah [More ...]
Habboonnada ayaa u furan gaadiidka
Magaalada Boosaaso iyo Agaasimaha Gobollada Waddooyinka ee Waddooyinku waxay wadashaqayn la lahaayeen Fair Junction, oo loo furay gaadiidka. Duqa Magaalada Boosaaso Alinur Aktas, oo ah qodob muhim ah oo ku yaala Istanbul Street ayaa ka dhigtay mid ammaan badan, ayuu yidhi. [More ...]
Marmaray, oo ay u istcimaalaan dadka reer Istanbul dhammaan qaybaha nolosha oo ay weheliso jidkii tareenka ee dhowaan la furay, ayaa markii ugu horreysay la furay Oktoobar 29. [More ...]
Abaalmarinta MAGNA Innovation Award leh NTN-SNR Sensor Bearing
NTN-SNR ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta hal-abuurka ee qaybta “Electrification”, kaas oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay Magna Powertrain ee 2018. NTN-SNR Roulements, oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee keena saamaynta adduunka [More ...]
Alstom, 10-12 wuxuu ka dhici doonaa Eurasia Rail oo ah mid ka mid ah carwada waaweyn ee tareenka gobolka ugu weyn iyo mid ka mid ah carwooyinka waaweyn ee tareenka adduunka oo lagu qaban doono İzmir bisha Abriil 2019. Shirkaddu waa unugga shidaalka hydrogen ee adduunka ugu horreeyay [More ...]
Nabadgelyada Waddada Shidaalka ee Caalamka ayaa lagu xirayaa Eurasia Rail 2019
International Rail, Light Rail iyo Logistics Exhibition - Eurasia Rail Turkey kaliya iyo xadiidka 3aad ee ugu weyn dunida oo dhan iyo nidaamka tareenka fudud in albaabada ay u furo si visitors carwada ee Izmir, 10-12 April 2019 [More ...]